Akụkọ - treatmentzọ ọgwụgwọ dị na saịtị maka iwepụ eriri belt
Light-waa ebu ebu
Silicone Rubber fom
Treatmentzọ ọgwụgwọ dị na saịtị maka ntụgharị belt
1. Dị ka nha nke njem njem, a na-ekewa ya: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 modelsdị ndị a na-ejikarị eme ihe dịka B1400 (B na-anọchi na obosara, na millimeters). Ka ọ dị ugbu a, ikike kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ bụ belt ebufe B2200mm.
2. Dika ebe eji eme ihe di iche, a na-ekewa ya n'ime ihe eji ebu roba, ihe na-ekpo oku na-ekpo oku, ihe na-eme ka oyi na-eguzogide roba, acid na alkali na-eguzogide roba, ihe na-eme ka ihe na-eme ka mmanu, ihe oriri na ụdị ndị ọzọ. Obere ọkpụrụkpụ mkpuchi roba na eriri belt ndị na-ebu roba na eriri nri bụ 3.0mm, na ọkpụrụkpụ nke obere mkpuchi roba bụ 1.5mm; eriri na-eguzogide roba na-eguzogide okpomọkụ, eriri na-eguzogide roba na-eguzogide ọgwụ, acid na alkali na-eguzogide roba na-ebu belt, na eriri na-eguzogide roba na-ebu belt. Okpukpo kachasị nke gluu bụ 4.5mm, na ọkpụrụkpụ nke mkpuchi ala bụ 2.0mm. Dabere na ọnọdụ a kapịrị ọnụ nke gburugburu ojiji, enwere ike iji ọkpụrụkpụ nke 1.5mm mee ka ndụ ọrụ nke elu roba na mkpuchi ala dịkwuo elu.
3. Dabere na ike mgbatị nke eriri ebu ebu, enwere ike kewaa ya na mpempe akwụkwọ na-ebugharị ya na eriri na-ebu akwa dị ike. E kewara eriri na-ebu ike dị ike na eriri naịlọn (NN) na nke na-ebu polyester (EP conveyor belt).
2. treatmentzọ ọgwụgwọ dị na saịtị maka iwepụ eriri belt
(1) Automatic ikpuru ala ndiiche ukpụhọde: Mgbe ndiiche nso nke ebu belt bụghị nnukwu, a onwe-kwado ịdọrọ ala nwere ike arụnyere na ndiiche nke ebu belt.
(2) Mgbatị kwesịrị ekwesị na ngbanwe dị iche iche: Mgbe eriri ebu ahụ wepụrụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri, yana ntụzịaka adịghị agbanwe agbanwe, ọ pụtara na eriri ebufe agbasaghị oke. Enwere ike idozi ihe na-eme ka esemokwu kpalite mmebi ahụ.
(3) Single-kwadoro vetikal ala ndiiche ukpụhọde: The ebu ebu mgbe niile deviates otu akụkụ, na ọtụtụ vetikal rollers nwere ike arụnyere na nso iji tọgharịa eriri.
(4) Gbanwee ihe ntụgharị ahụ: eriri na-ebufe ihe na-agba ọsọ, lelee ma igwe na-adịghị mma ma ọ bụ na-agagharị, gbanwee ọnọdụ ahụ na ọnọdụ dị iche iche wee gbanwee iji kpochapụ ihe dị iche.
(5) Idozi ndiiche nke eriri ebu ebu; eriri ebu ahụ na-agba ọsọ mgbe niile n'otu ụzọ, ntụgharị kachasị dị na nkwonkwo. Enwere ike idozi eriri na-ebufe eriri na etiti eriri nke na-ebufe mbugharị iji wepụ ihe dị iche.
(6) justgbazigharị ngbanwe nke igwe na-adọkpụ a na-ebuli elu: eriri na-ebufe nwere ụzọ ntụgharị na anya dị anya, na otu dị iche iche nke ndị na-adọkpụ ịdọrọ nwere ike ibuli n'akụkụ nke ụzọ ntụgharị ahụ iji wepụ ihe dị iche.
(7) Gbanwee ndiiche nke ikpuru ala: ntuziaka nke onye na-ebufe ihe na-ebugharị ihe doro anya, yana nyocha ahụ na-achọpụta na akara nke eriri adọkpụ abụghị ihe dị n'etiti etiti eriri ebu ahụ, yana onye na-adọkpụ nwere ike edozi ka iwepu ndiiche.
(8) Mkpochapu ihe mgbakwunye: isi mmalite nke eriri ebu na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na achọtara mgbakwunye na draịlị na-agba agba na mkpọ, a ga-ewepụ ndịiche ahụ mgbe ewepụsịrị ha.
(9) Idozi ndiiche nri: teepu adighi-agbada n’ibu di oku, ma adighi-aghagharia n’ibu di aro. Enwere ike idozi ndepụta ndepụta na ọnọdụ iji kpochapụ ntụgharị.
(10) Idozi mmezi ihe nkedo: ntuziaka nke ntụgharị nke onye na-ebu eriri, a na-edozi ọnọdụ ahụ, ma ntụgharị ahụ dị njọ. Enwere ike ịhazi ọkwa na nkwụnye ihe nkwado ahụ iji wepụ ihe dị iche.
Adress: Gate1509, C4, Nke 298 Fangcheng Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Wuxi, Jiangsu, China